HomeWararka MaantaMane: Liverpool wey garaaci doontaa Manchester United
Laacibka baasha ka ciyaara ee reer Senegal ayaa si kalsooni buuxda leh u sheegay in kooxdiisu dhababaco ku mari doonto kooxda United Kulanka habeenka Isniinta ah dhex mari doona labada naadi.
Liverpool’s German manager Jurgen Klopp (R) celebrates with Liverpool’s Senegalese midfielder Sadio Mane folowing the English Premier League football match between Chelsea and Liverpool at Stamford Bridge in London on September 16, 2016.
Sadio Mane waxaa sababtay inuu sidaas kalsoonida leh uga hadlo guusha ay kooxdiisu gaadhi doonto, dib u milicsiga kulanadii u dambeeyey labada kooxood yeeshaan oo kooxdiisu guul gaadhay halka United ay xaaladu ku adkayd.
Labada naadi ayaa markii koobaad horyaalka sanadkan isku arki doona geggida Anfield habeenimada Isniinta, iyadoo ay Saddex dhibcood u dhexeeyaan kala saraynta liiska.
Laakiin Mane wuxuu rumaysan yahay inay kooxdiisu sii kordhin doonto guulaha lixda kulan ee xidhiidhka ah ay tartamada oo dhan ka gaadheen.
“Waxaanu doonaynaa inaanu dhulka la dhacno Manchester United,” ayuu Mane ku yidhi majalada the Daily Telegraph.
Wuxuu hadalka sii raaciyey: “Dabcan [Anigu sidaan filayo]. Dhamaantayo sidaas ayaanu rumaysanahay oo naga dhaadhacsan. Waxaanan doonaynaa inaan ka dhabayno.”
AC Milan 2-1 Udinese: Kalinic Oo Guul Ku Hogaamiyey Milan
Tababaraha Arsenal: ‘Mar-marsiinyo ma jiro kulanka Chelsea’